Yenza istudiyo esimangalisayo sokusebenza | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Xa siqala ikhosi entsha, i-adventure entsha, yonke into iyinto engaqhelekanga. Unemibono emininzi kwaye uyilinganise ngokweenkcukacha. Okanye uzama. Ukuba uyilo, kokubini nguwe okanye ngabantu abaninzi uyila istudiyo esifanelekileyo sokusebenza. Imibala, iitafile, iikhompyuter… Yonke into kufuneka ikhanye kwiliso. Ke, iya kuba yindawo efanelekileyo yokusebenzela. Njengoko besithi "Ukuba usebenza kwizinto ozithandayo awusoze usebenze." Lo ngumbono.
Ngamanye amaxesha oku akwenzeki ngendlela ebesifuna ngayo. Kwaye ayisiyiyo kuba khange sibe nayo incasa elungileyo, ngokuchaseneyo. Kodwa xa kuziwa emsebenzini, fimiba ethile icacisiwe kuphononongo loyilo lwethu olunokubaluleka kwimisebenzi yokusebenza. Kwi-Creativos siza kubeka eziphi izinto esinokuzibandakanya kolu luhlu ukufezekisa iinjongo ezingcono emsebenzini.
1 Izihlalo eziguqukayo kunye nezisemgangathweni
2 Ukukhanya kwendalo kakhulu
3 Bonisa inkqubela phambili yawo onke amalungu afundayo
4 Itafile enkulu eqhelekileyo: Isisiseko
5 Elula njengaleyo, imbiza yekofu
Izihlalo eziguqukayo kunye nezisemgangathweni
Mhlawumbi emva kokubeka ezona tafile zintle, ezona ndonga zintle kunye neekhompyuter zokugqibela wasika izitulo. Oku kunokuba yimpazamo. Isitulo esiqinileyo sinokuziva ngathi sisibatha. Imvakalelo ekuvalelayo kwaye ikwenza ungonwabi. Ukuhamba kunye nendawo kubalulekile.
Oko kunokuba lula njengokukhuthaza abasebenzi ukuba baskrole kwi studio. endaweni yokubabela indawo yokusebenza, kwaye abanye abantu baphendula kakuhle koku: igcina izinto zingami kwaye idala iibhondi ezininzi ngaphakathi kwiqela.
Ukukhanya kwendalo kakhulu
Asinguye wonke umntu onokufumana indawo enkulu nebanzi. Siyazi. Kodwa, ngaphakathi kokunokwenzeka, kufuneka sizame ukwandisa eso sithuba sinaso. Kungenxa yoko le nto ukudala indawo evulekileyo ngokukhanya okucacileyo kubalulekile.
Okokuqala, zama ukufumana ukukhanya kwendalo kangangoko kunokwenzeka. Kuya kuhamba kunye nokufundwa kweetoni ezicacileyo, ezikhuthaza indalo. Kwimeko apho ukukhanya kwendalo kungenakwenzeka, kuyacetyiswa ukuba utyale imali ethe kratya ekukhanyeni okungafunekiyo. Umgangatho ophezulu we-LED, hayi kuphela ngenxa yokusetyenziswa okuphantsi, kodwa nangenxa yendlela ekuchaphazela ngayo ukukhanya.
Bonisa inkqubela phambili yawo onke amalungu afundayo
Iiarhente ezininzi zoyilo zikhuthaza ukuphoswa kwezimvo eludongeni. Ayisiyiyo kuphela imiboniso kunye neentlanganiso zokuphononongwa kobuchule, kodwa ukumema ingxelo eqhubekayo eyakhayo kuwo wonke umntu okwisitudiyo, hayi abo basebenza kwiprojekthi.
Ngenye indlela, tyala imali kwiindawo ezithile zokuqhubela phambili. Kuxhomekeke kwinkangeleko yesitudiyo sakho, ukhetho lunokubandakanya ibhodi enkulu yecork enezikhonkwane zokutyhala, ibhodi yesinyithi eneemagnethi, okanye enye into engaqhelekanga njengelaphu kunye nevelcro combo, okanye umtya onee-pegs ezincinci. Nantoni na ekufaneleyo.
Itafile enkulu eqhelekileyo: Isisiseko
Ukwenza umoya wokuyila kunye nowokusebenzisana, kufuneka sonyuse inani letafile efanayo kuwo onke amalungu.. Ayisiyonto malunga nokuba ingakanani enkulu ngcono, imalunga nemilinganiselo eyaneleyo yokuba wonke umntu adityaniswe xa kufuneka njalo. Kuxhomekeke kubungakanani besitudiyo kunye nabantu, itafile embindini wayo inokuba luncedo kakhulu. Oku kwakha ukuthembana kunye nokuncamathisela abanye. Ke, izimvo eziqhelekileyo zinokugcinwa kwaye iiprojekthi ezibuthathaka zinokuqiniswa.
Kwimeko yokubanakho ukuhlawula, sinokongeza itafile eyenziweyo yokulinganisa. Kude nakweyiphi na indlela eqhelekileyo, kwaye ukuba luyilo olwenziwe liqela elinye, kungcono.
Elula njengaleyo, imbiza yekofu
Kwiiarhente ezininzi zoyilo, ukuba nekhitshi ekwabelwana ngalo, mhlawumbi nebar, kunokuba luncedo.. Ukupheka, ukutya nokusela kunye yeyona ndlela ilungileyo yokuba amaqela adibanise ngaphaya kweemfuno zeprojekthi yamva nje.
Izitudiyo ezincinci zisenokungabinayo indawo okanye imali yokufaka ikhitshi eligcweleyo, ewe. Kodwa ukutyalomali kumgangatho ofanelekileyo we-espresso ngomatshini kwiqela, umzekelo, kunokuhamba indlela ende. Utshintsho lokwahlulahlula kumatshini oqhelekileyo wesoda, obonakala ngathi kukukhangela kwezemali kunendawo yokuphefumla kunye nokwabelana.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Yenza istudiyo esimangalisayo sokusebenza